Window7မှာ ကို့စိတ်ကြိုက် Custom Font Size ဖန်တီးရအောင် ~ မျိုးကို
Window7မှာ ကို့စိတ်ကြိုက် Custom Font Size ဖန်တီးရအောင်
02:50 Technique, Window7No comments
အမြင်သိပ်မကောင်းလှတဲ့ သူတွေအတွက်. Default အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အနေအထားလေးတွေကို ပြောင်းလဲ ချင်သူတွေ အတွက်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်တော့ default font size မဟုတ်ဘဲ Window အတွက် ကိုလိုချင်တဲ့ Custom font size ကိုပြောင်းလဲ ကြည့်ချင်သူများ အတွက်ပါ။
1.Start Button ကို Click ပါ ။ Display လို့ ရိုက်ပါ။ Display ကို ရွေးပါ။
2. Display အောက်က Small ဒါမဟုတ် Medium ကိုကြိုက်ရာကို ရွေးပီး Apply လုပ်ပါ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်တို့တွေ Window7ရဲ့ font size ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ အတွက် အောက်က ပုံလေးလို screen resolution ကိုလည်း ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ Display Setting ရဲ့ ဘယ်ဘက်အကွက်ထဲမှာ ပြထားတဲ့ custom DPI option ကနေလည်း ကျွန်တော် တို့ရဲ့ မျက်လုံး အတွက် ပိုမို သင့်လျော်တဲ့ Font Size ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။အောက်က ပုံလေးလို custom dpi ရဲ့ အောက်မှာလည်း custom windows font ကို ဖန်တီးလို့ ရပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ Window7မှာ ကို့ တို့ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Font Size လေးတွေကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲလို့ ရပါပီ။